Waxbarashada Waayo Qaxootiga | The Refugee Center Online | Refugee Center Online
Boggan wuxuu leeyahay macluumaad kaa caawinaya in aad ku dhameysan waxbarashadaada, bartaan Ingiriisi, iyo caawin Carruurtaada dugsi.
Dhameysan dugsiga sare
websites Best in ay bartaan Ingiriisi
In Section Tani
Ma rabtaa in aad dugsiga ku dhameysan? Waxaad ka kasban kartaa GED ah oo ay helaan shahaadada dugsiga sare. Tani waxay kaa caawin doona inaad shaqo fiican hesho oo laguu ogolaado in aad si aad u codsato jaamacadaha. Akhri wax dheeraad ah
Baro sida loo codsado college. Raadi deeq waxbarasho si ay kaaga caawiyaan in aad bixiso kharashka kulliyadda. Akhri wax dheeraad ah
Baro aad imtixaanka GED iyo dhalashada. Raadi bogagga ugu fiican si ay u bartaan Ingiriisi. Akhri wax dheeraad ah
Ma aad caruur leedahay? Baro oo ku saabsan dugsiga ee America. Baro sida loo aanad bilaabin carruurta dugsiga. Baro sida loo caawin Carruurtaada dugsi. Akhri wax dheeraad ah
Ma waxaad tahay macallinka ka mid ah qaxooti ama soo galootiga carruurta? xirfadaha Gain si ardayda loogu caawiyo in aad ku guuleystaan. Akhri wax dheeraad ah
khayraadka waxbarashada More
Eeg dhamaan bogagga our ee qaybtan. Ka raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan GED, dugsiga loogu talagalay carruurta, fasalo online, waxbarashada sare, iyo khayraadka macallinka. Akhri wax dheeraad ah